ဘုရားသှားပွီး နှဈယောကျအတူ ရကေုသိုလျ ယူခဲ့ကွတဲ့ စညျဖွိုး နဲ့ ခငျလှမျး တို့ခဈြသူနှဈဦး – Askstyle
ဘုရားသှားပွီး နှဈယောကျအတူ ရကေုသိုလျ ယူခဲ့ကွတဲ့ စညျဖွိုး နဲ့ ခငျလှမျး တို့ခဈြသူနှဈဦး
ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ စညျဖွိုး ဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှေ ခဈြခငျအားပေးရတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈဦးပါ။ သူသရုပျဆောငျ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားမြားစှာ ရှိတာကွောငျ့ သူ့ကို ခဈြခငျအားပေးတဲ့ ပရိသတျအခိုငျအမာ ရရှိထားတာပါ။ စညျဖွိုး ပါဝငျသရုပျဆောငျ ထားတဲ့ သတျကှငျး ရုပျရှငျ ဇာတျကားကွီးက လညျး ပရိသတျတှေ ကွားမှာ နာမညျကွီးခဲ့တာပါ။ သရုပျဆောငျ သကျမှနျ မွငျ့တို့နဲ့ အတူ”တဈသကျစာ” ရုပျရှငျဇာတျကားကို ရိုကျကူးထားပါသေးတယျ။။ဒီတဈခါမှာတော့ ခဈြပရိသတျတှေ အတှကျ စညျဖွိုး သူ့ရဲ့ ခဈြသူတို့ရဲ့ ပုံရိပျကလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးက သူ့ရဲ့ခဈြသူလေး သရုပျဆောငျမျောဒယျလျ ခငျလှမျးနဲ့အတူ ရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံရိပျတှကေို မြှဝထေားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။စညျဖွိုးရဲ့ ခဈြသူ ခငျလှမျး ကလညျး သရုပျဆောငျပီပွငျသူလေးပါ။ သူမက Tik Tok Video လေးတှေ ရိုကျကူးပွီး ဖစျေ့ဘှတျပျေါမှာဖျောပွလရှေိ့ပါတယျ။
စညျဖွိုး က “ရကေုသိုလျကို ၂ယောကျအတူတူ စိတျတူကိုယျတူ ကုသိုလျပွုလုပျခဲ့ပါသေးတယျ ….
အားလုံးပဲ ကနျြးမာ ခမျြးသာ ခဈြကွပါ ” ဆိုပွီး ခဈြသူလေးနဲ့ ဘုရားမှာ ရိုကျထားတဲ့ ပုံလေးတှကေို ဖျောပွထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။။
အရမျးကိုလိုကျဖကျတဲ့ စညျဖွိုးတို့ ခဈြသူနှဈဦး ရဲ့ ပုံရိပျကလေးတှကေို ဆကျလကျကွညျ့ရူပေးကွပါဦးနျော။
သရုပျဆောငျ စညျဖွိုး တို့ခဈြသူနှဈဦး ရဲ့ ပုံရိပျကလေးတှကေို ပရိသတျတှေ သဘောကကြွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။ ကွညျ့ရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုး ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦးပါ။ သူသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားများစွာ ရှိတာကြောင့် သူ့ကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိထားတာပါ။ စည်ဖြိုး ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ သတ်ကွင်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးက လည်း ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။ သရုပ်ဆောင် သက်မွန် မြင့်တို့နဲ့ အတူ”တစ်သက်စာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်။။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် စည်ဖြိုး သူ့ရဲ့ ချစ်သူတို့ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးက သူ့ရဲ့ချစ်သူလေး သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ် ခင်လွှမ်းနဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မျှဝေထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။စည်ဖြိုးရဲ့ ချစ်သူ ခင်လွှမ်း ကလည်း သရုပ်ဆောင်ပီပြင်သူလေးပါ။ သူမက Tik Tok Video လေးတွေ ရိုက်ကူးပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
စည်ဖြိုး က “ရေကုသိုလ်ကို ၂ယောက်အတူတူ စိတ်တူကိုယ်တူ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် ….
အားလုံးပဲ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ချစ်ကြပါ ” ဆိုပြီး ချစ်သူလေးနဲ့ ဘုရားမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။။
အရမ်းကိုလိုက်ဖက်တဲ့ စည်ဖြိုးတို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော်။
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုး တို့ချစ်သူနှစ်ဦး ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။